KhunMoung ' s: March 2007
Mp3 သီချင်းတွေလား ... ရော့ယူထား အလကား
သီချင်းတွေကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိူင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုပါ ... အဲဒီမှာရှိတဲ့ သီချင်းတွေအားလုံးက Mp3Format Songs တွေဖြစ်ပါတယ် ... Bit Rate 128 to 256 kbps ရှိတဲ့ Mp3 သီချင်းတွေကို ဒေါင်းလုပ်ရယူနိူင်ပါတယ် ... အင်္ဂလိပ် သီချင်း A to Z ရုရှား သီချင်း А to Я ရှိပါတယ် ... Account ဖောက်စရာမလိုပါဘူး .... Register လုပ်စရာ မလိုပါဘူး .....
Today's Comic နောက်ဆက်တွဲ
ဟဲဟဲ....ကာတွန်းမှာပါတဲ့ စာသားတွေက ပုံသေးတော့ စာတွေ မမြင်ရမှာ စိုးလို့ Dialogue တွေကို ပို့စ်ထပ်တင်လိုက်ပါတယ် ... ကာတွန်းပုံကို Click လိုက်ရင် New Tab or New Window တစ်ခုနဲ့ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်ပြီး ဘာမှမမြင်ရဘူး ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ......
The first man: I came fromadysfunctional family.
The Other: Is that spelled with an "I" ora"Y"?
The first man: A Why..
ကျွန်တော်သွားသွားကြည့်နေကျဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ http://www.comics.com/creators/bc/ က ကာတွန်းပုံလေးပါ .... အဲဒီ ကာတွန်း ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က နေ့စဉ် အပ်ဒိတ်ရှိပါတယ် ..... Today's Comic by Johnny Hart ကို ဝေမျှတာပါ .... အဲဒီဆိုဒ်မှာ ကာတွန်းတွေအပြင် Humor Columns , Puzzles , E Cards စသဖြင့် ရှိပါသေးတယ် .... ကျွန်တော်ကတော့ Comics တွေကိုပဲ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တာ များပါတယ် .... Today's Comic တွေကို RSS Feed တွေကနေ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် .....
BLAZE - အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ
အိပ်လို့မရဘူး မျက်လုံးတွေ မမှိတ်သေးဘူး
မြင်နေတယ် ခုထိ မင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးပဲ မြင်ယောင်ရင်း
လွှဲလို့မရဘူး အာရုံကဒီစက်ကွင်းထဲ အချိန်အခါတွေမနည်းဘူး
အခုထိ မင်းအကြောင်း စဉ်းစားကာနေတုန်း
ဒီလိုညတိုင်း ငါနဲ့မင်း အတူနေခွင့်ရှိရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ
ဒီလိုညတိုင်း ငါနဲ့မင်း အတူဆုံတွေ့ဖြစ်ရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ
စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်တော့ဘူး မင်းကြောင့်
ဘယ်အခြေအနေ ရောက်ရောက် အတွေးထဲ
အချိန်တွေတိုင်းပဲ ငါ့စိတ်က မင်းအနားရောက်ရောက်လာနေတယ်
ဒီလိုညတိုင်း ငါနဲ့မင်း ( အို )ဆုံတွေ့ဖြစ်ရင် အတိုင်းထက်အလွန်ပဲ
Adobe Acrobat 8 Professional ကထွက်တာ ကြာပါပြီ .. Full Version ကို Torrent ကနေ Download ပြီးယူထားတယ် .... မသုံးဖြစ်ဘူး .... Version7နဲ့လည်း အဆင်ပြေနေတာပဲ .... သုံးလို့ရနေသေးတာပဲ ... ဆိုတာကြောင့်လည်း ပါတယ် ... ပြီးတော့ Version7မှာတောင် ကိုယ်မသုံးဖူးသေးတဲ့ Functions တွေ ရှိသေးတယ် ... နောက်တစ်ခုရှိတာက Application Software ပဲဖြစ်ဖြစ် System Software ပဲဖြစ်ဖြစ် စပြီးတော့ Release လုပ်လုပ်ချင်းမှာ ပြီးပြည့်စုံအောင် ကောင်းမွန်ပြီးသားတွေ မဟုတ်သေးဘူးလေ ... ဟိုတစ်နေ့ကတော့ ဘယ်နားထားမိမှန်းတောင် မသိတော့တဲ့ Acrobat 8 ကို ပြန်ရှာပြီး Install လုပ်လိုက်တယ် ... Torrent ကဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတဲ့ SetUp.exe က သုံးလို့ မရဘူးဗျာ ... Installation Process 26.2% လောက်မှာ ထစ်ထစ်သွားတယ် ... ၂ ကြိမ် ၃ ကြိမ် ကြိုးစားလည်း မရဘူး ... အဲဒါနဲ့ ဂူဂယ်လ်ရတော့တာပေါ့ ... Torrent File တွေရော .... တခြား Software WebSite တွေရော ရှာတယ် ... တွေ့တယ်ပေါ့ဗျာ ..... ဒါပေမယ့် Adobe မိခင်ဆိုဒ်ကြီးကိုပဲ ၀င်လိုက်တော့တယ်.... သူ့ဆိုဒ်မှာ Adobe Acrobat 8 Professional 30-day trial ပါတဲ့ ... ဒီအတိုင်းမရသေးဘူး .... Register and Download ပါတဲ့ .... ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာ .... ဟိုဖြည့်ဒီဖြည့် နောက်ဆုံး E mail ထဲကို Information about your Trial Download ဆိုပြီးတော့ Download လုပ်ဖို့ Link တစ်ခု ရောက်လာတယ် ... 263 MB ဗျ .... ကျွန်တော့် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ ၂ နာရီကျော်ဆွဲလိုက်ရတယ် ....အဲဒါကို Install လုပ်တော့ ရှောရှောရှုရှုပဲ .... Trial Version ကို Install ပါတယ် .... ပြီးတော့ အရင်က ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတဲ့ Crack File ထဲက .dll File တစ်ခုကို Program Directory မှာ သွားပြီးတော့ Overwrite ပါတယ် ..... Now my program is fully activated .......
ကျွန်တော် သေသေချာချာ မသုံးကြည့်ရသေးဘူး .... အခု Version 8 မှာ PDF File type ကို Word Document နဲ့ Picture Format တချို့ရယ် Web Page Format တချို့ရယ် Text Format တွေအဖြစ် Export လုပ်နိူင်လာတယ် .... Version7မှာ မပါဘူးလေ ... အင်း သုံးကြည့်ကြပေါ့ဗျာ .... exe File ကတော့ File Size အရမ်းများပါတယ် .... Crack File ကိုတော့ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ဖို့ ကျွန်တော် ရှဲလ်ထားပါတယ် ....
Crack File Zip (753 Kbs) Download Here [Link 1] [Link 2]
အင်း....ဧပရယ်ဖူးလ် Day နီးလာပါပြီ.....အဲဒါသတိရတာနဲ့ Wikipedia မှာကျွန်တော်သွားရှာဖတ်ကြည့်တာ ပြန်လည်ဝေမျှတာပါ .... အခုပို့စ်မှာ ဧပရယ်ဖူးလ် Day စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေ အကြောင်း ကူးယူဖော်ပြထားတာပါ .... ချစ်သူ ခင်သူ မိတ်ဆွေ အချင်းချင်း စနောက်ကြ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လှည့်စားကြရုံတင် မကပါဘူး .... သတင်းဌာနတွေ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ အသံလွှင့်ဌာနတွေ အင်တာနက်က သတင်းတွေကလည်း ဧပရယ်ဖူးလ်လုပ်ပါတယ် ... အဲဒီအကြောင်းအရာ အသေးစိတ်တွေကို ဒီမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား .... အင်း....ကျွန်တော်လည်း အဲဒီနေ့ကြရင် ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ မသိဘူး .... သြော်....ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာအရူးလုပ်ခံရမလဲ မသိသေးဘူး .....
It has been suggested that Europe derived its April-fooling from the French.France was one of the first nations to make January 1 officially New Year's Day (which was already celebrated by many), by decree of Charles IX. This was in 1564, even before the adoption of the Gregorian calendar (See Julian start of the year). Thus the New Year's gifts and visits of felicitation which had been the feature of the 1st of April became associated with the first day of January, and those who disliked or did not hear about the change were fair game for those wits who amused themselves by sending mock presents and paying calls of pretended ceremony on the 1st of April. French and Dutch references from 1508 and 1539 respectively describe April Fools' Day jokes and the custom of making them on the first of April.
In France the person fooled is known as poisson d'avril. This has been explained from the association of ideas arising from the fact that in April the sun quits the zodiacal sign of the fish. A far more natural explanation would seem to be that the April fish would beayoung fish and therefore easily caught. The French traditionally celebrated this holiday by placingadead fish on the back of friends. Today the fish is substituted byapaper cut out.
စိုင်းထီးဆိုင် မျိုးကျော့မြိုင် နဲ့ ဟန်ထူးလွင်တို့ရဲ့ သီချင်း ၃ ပုဒ်ပါ ..... စိတ်ညစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုသီဆိုထားကြတာပါ ... တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီပေါ့ဗျာ......ကျွန်တော်ကတော့ ကိုထီးဆိုထားတဲ့ သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးဗျာ .... ခံစားချက်ပိုပါတယ် ... ကိုထီးရဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက Vocal ပေါ့ဗျာ .... လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ညစ်တဲ့ ခံစားချက်ကို ပိုပေါ်လွင်တယ် ထင်တယ်ဗျ
1.SaiHtiSai - A Man Who Needs To Be Drunk
2.MKM - SateNyitNayLar
3.BigBag - SateNyitYaParLar
ဇော်ဂျီ EOT ကို CSS code မှားပြီးထည့်ထားတာ .....
File Hosting လုပ်ထားတာက ZAWGYIO0.eot ....
Src Url မှာ ကျွန်တော်ထည့်တာက ZAWGYIO1.eot ....
ဖတ်ရှူလေ့လာမှတ်သားခဲ့တဲ့ Blog တွေအားလုံး..
အထူးသဖြင့် ...........ကိုညီလင်း ကိုမောင်လှ ကိုဒဿန မောင်ဇန် ...ကျေးဇူးကမ္ဘာဆိုင်ယော်.....
ရိုးသား၏ ရဲရင့်စွာ ......